Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu bọọlụ Norwegian Erling Haaland Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Erling Haaland na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, umunne ya (Astor na Gabrielle), Enyi nwanyi / nwunye ka o buru, ibi ndu, ndu nke onwe ya na uru ya.
Na nkenke, anyị nwere akụkọ zuru oke nke ndị ọkachamara n'egwuregwu Norwegian na-akpọsa dịka otu n'ime ndị na-eto eto kachasị mma n'ụwa. LifeBogger na - eburu gị site na akụkọ Halland - site na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu mara mma.
Iji mee ka agụụ autobiography gị sie ike na ọdịdị nke Erling Haaland's Bio, nke a bụ ụlọ nnabata oge ndụ na mbili nke Norwegian. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-ekpughe eziokwu ahụ bụ na ọ bịawo n'ụzọ dị anya.
Akụkọ banyere Erling Haaland. Lee ndụ nwata ya na oke ịrị elu ya.
Mụ na gị maara na ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi (na igbe ahụ), nnukwu, ngwa ngwa, na-atọ ụtọ nke ukwuu na obere iju. Karịsịa, Erling bụ igwe nyocha, onye dị ndụ ma na-eku ume site na nkà iji nweta ihe mgbaru ọsọ.
N'agbanyeghị ọtụtụ aha ndị a na-enye aha ya, ọ bụghị ọtụtụ ndị na-egwu egwu agbachawo otu nsụgharị nke Erling Halland's Biography. Anyị emeela ihe iji kwadebe ya, naanị maka gị na maka egwuregwu bọọlụ. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Akụkọ Erling Haaland nke ụmụaka:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha nickname - Manchild na Big Earl. A mụrụ Erling Braut Haaland na 21st ụbọchị nke July 2000 na nne ya, Gry Marita Braut na nna, Alf-Inge Håland, na Leeds, West Yorkshire, England.
Zute Erling Haaland nne na nna - nna ya, Alf-Inge Håland na nne ya, Gry Marita Braut.
Ndi Norwegian bịara n’uwa dika nwa amuru ikpe azu, n’ime umu ato amuru na njikọ n’etiti ndi mụrụ ya. Alf-Inge na Gry Marita nwere nwa ha nwoke na England n’ihi na ezinụlọ ha bi n’ebe ahụ n’oge ahụ. N'afọ amụrụ ya (2000), nna Erling gbara bọọlụ na bekee.
Maka Erling, inwe nwanne nwoke na-ahụ n'anya na Astor wetara ọtụtụ mmetụta nwata. Nke a ka ọ na - agbakọta n'ime ncheta nwata zuru oke. I nwere ike ịnọ na-eche ihe kpatara o jiri jiri uwe Man City. Ọ bụ n'ihi na papa ya, Alf-Inge Rasdal Håland, kpọọrọ klọb ahụ n'etiti afọ, 2000 ruo 2003.
Erling Halland enweghị Astor, nwanne ya nwoke nke okenye. Ya na nwanne nwanyị okenye, Gabrielle Haaland toro. Erling nwere mmekọrịta nwanne na nwanne zuru oke. Dika nwatakiri, o juputara na ike - odikwa onu. Grinning dị ka pusi Cheshire na-ewetara ọtụtụ ihe ọhụụ na-enweghị atụ n'oge Astor na Gabrielle.
N'afọ 2004, mgbe ọdachi ezinụlọ gasịrị (akọwapụtara n'okpuru), ezinụlọ Erling Haaland hapụrụ England. Ọ dị afọ atọ mgbe nne na nna ya kwagara Bryne, bụ obodo ha na Norway. Nke a bụ ebe o jiri oge ezumike nwata ya.
Na-etolite na Bryne na Norway, Haaland na-eto eto bụ nwa na-ahụ n'anya ma nwee ume nke na-esoro ndị enyi ya agba bọl n'okpukpe. Na mgbakwunye, ndị na-eto eto na-anụ ọkụ n'obi nwere mmasị na mmega ahụ dịgasị iche iche gụnyere golf, egwuregwu na aka.
Ezigbo Ezinụlọ Erling Haaland:
Ndi Norwegian sitere na ulo ndi bi na iku ume egwuregwu. Mkpụrụ ndụ Erling Haaland dị mma dị ka nne na nna ya na-arụsi ọrụ ike n'egwuregwu. Na mgbakwunye, ọ na-anata ezigbo ndụmọdụ ma na-agbaso usoro sitere na ezinụlọ.
Erling Haaland bụ nwa nke Not Nothamham, Leeds United na ndị na-agba ọsọ Manchester City, Alf-Inge Rasdal Håland. Nke a bụ foto nke papa ya n'oge ezigbo egwu ya na klọb ndị England.
Ọnọdụ egwuregwu nke nna Erling Haaland Alf-Inge Rasdal Håland dị na nchekwa na midfield. Utgba n'etiti etiti na azụ hụrụ ya ka ọ na-atụ ụfọdụ goolu mara mma n'oge ọrụ ya. Nke a bụ vidiyo nke Alfie Haaland na-egwu egwu ụbọchị. Lee ọrụ dị ịtụnanya!
N'aka nke ọzọ, nne Erling Haaland, Gry Marita Braut bụbu onye heptathlete. Iji nyere gị aka ịghọta, a na-akpọ aha egwuregwu ya Heptathlon. Ọ bụ asọmpi maka ụmụ nwanyị nke onye ọ bụla na-eme egwuregwu na-asọmpi egwuregwu asaa dị iche iche.
Anyị nwere vidiyo a, nke ga - enyere gị aka ịghọta Heptathlon dị ka egwuregwu. Obi abụọ adịghị ya, nne Erling Haaland - Gry Marita - bụ maka ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe omimi nke nwa ya nwoke.
Nna Erling Haaland na Roy Keane Akụkọ - Akụkọ jọgburu onwe ya:
Dabere na ndị ọkachamara bọọlụ, ọ bụ mwakpo anụ ahụ emere na ọbara oyi. Ruo taa, nna Erling Haaland (Alf-Inge Haaland) agbagharaghị Keane maka ọgụ ahụ na-eweta ọnwụ. Vidio dị n'okpuru na-akọ akụkọ banyere nsogbu ịma aka Roy Keane na Alf-Inge Haaland.
N'iso ihe merenụ, Roy Keane enweghị ike ịnwa anwa - ile anya Alf-Inge Håland na anya. O di nwute, mmegwara mmegwara anya ahu huru oru nna Erling Haaland. O butere mbughari ezinụlọ ya na Norway.
Maka ọtụtụ ndị ezinụlọ Erling Haaland na ndị enyi, Roy Keane ka bụ ihe kpatara na ha enweghị mmasị na Manchester United. Ọzọkwa, mgbe ọ bụla Roy Keane pụtara na TV dị ka pundit football, ha na-eru maka ha ime akara iji gbanwee ọwa TV.
Ezinụlọ Ezinụlọ Erling Haaland:
Norwegian bụ agbụrụ ọcha ma nwee mgbọrọgwụ site na Bryne, obere obodo dị na mpaghara Rogaland, Norway. Ọ bụ ezie na amụrụ ya na England, a zụlitere Erling na Bryne ebe ezinụlọ ya si.
Site na mwakpo Keane megide nna Haaland, ụkwụ gbajiri agbaji nke rụpụtara mgbe emechara ya ahụ. N'enweghi olile anya na ị ga-aga n'ihu n'egwuregwu bọọlụ, Alf-Inge dara ogbenye kpebiri ịkwado akpụkpọ ụkwụ ya. Njedebe nke ọrụ ya manyere Erling Haaland Family ịhapụ England nke ọma.
Na 2004, mgbe Erling dị afọ atọ, ọ nwere mmasị na Bryne, obodo nna ya na Norway. Naanị na ndị bi na 12,000, Bryne bụkarị ndị amaara maka bọọlụ. Nke a bụ ebe Alf-Inge (papa ya) malitere ịkpụzi akara aka nwa ya.
Ọ na-esiri Alf-Inge ike ịnagide ihe mgbu na-aga n'ihu nke mmerụ ahụ ya ma hapụ ya, ngwụsị nke ọrụ ya - ihe niile kpatara Roy Keane. Site na mgbe ọ kwụbara akpụkpọ ụkwụ ya, ọ malitere ịchọ nwa nwoke ikpeazụ ya - ka ọ gaa n'ihu ibi ndụ nrọ ezinụlọ ya.
Erling Haaland Mmụta:
N'oge ọ ruru agụmakwụkwọ, papa ya (Alf-Inge) debara aha ya n'ụlọ ọrụ egwuregwu nke dabara na ya. Nwa okorobịa Erling, n'afọ 2006 (afọ 5) debara aha na Bryne Fotballklubb ebe ọ natara uru kachasị mma nke agụmakwụkwọ egwuregwu.
N'ịchọ ịbanye na bọlbụ mgbe ọ dị obere, Haaland nwere mmasị na egwuregwu ndị ọzọ dịka nwatakịrị. Nwatakịrị ahụ dị ọtụtụ, dịka nne ya, sonyere bọọlụ aka, golf, egwu na ubi wdg Erling Haaland sonyere na egwuregwu Heptathlon mgbe ọ gbara bọọlụ.
You Dika nwata (gbara aho isii), Erling Haaland mebiri ndekọ nke ụwa. O meriri nturu ugo a na udi ndi ya n'otu oge - maka uzo di elu kariri umuaka n’uwa. O juru onye ọ bụla anya na kpakpando bọlbụ ga-eme n'ọdịnihu gbagoro n’ogo edepụtara nke mita 1.63 n’afọ 2006.
Erling Haaland Football Akụkọ:
Mgbe o nwesịrị ule na-aga nke ọma, nwatakịrị ahụ debara aha ya na Bryne FK, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ football nke obodo ya. N'oge a (ka ọ dị afọ isii), Haaland mere mkpebi ilekwasị anya naanị na football. Ọ bụ mkpebi ndị mụrụ ya mere ka ọ bido Bryne FK n'ihi na papa ya (Alf-Inge Håland) malitere igwu egwu ebe ahụ.
N'ajụjụ ọnụ Goal, onye nchịkwa izizi nke Erling Haaland, Alf Ingve Berntsen, kwuru banyere nwata nwata - site n'ịhụ ya ka ọ na-azụ ọzụzụ na nke izizi. N'okwu ya;
Ahụrụ m Erling na nke mbụ ya mgbe ọ sonyere ọzụzụ ime ụlọ anyị. Mmetụta abụọ abụọ nke Haaland dugara na ihe mgbaru ọsọ.
Ebe ọ bụ na ọ ka ndị ọzọ mma, anyị kpọtara ya ozugbo ka ọ kpọọ ụmụ nwoke, otu afọ karịa ya.
Haaland malitere njem football ya dị ka obere ụmụaka. Ọ bụ ụdị nke mere ihe atọ zuru oke. Nke mbụ, ọ na-amụmụ ọnụ ọchị karịa (oge niile), nke abụọ, ọ kacha emega ahụ na nke atọ (nke kachasị mkpa), o meriri ọtụtụ goolu. Nke a bụ ihe ngosi ihe atụ nke ọchị ya.
Erling Haaland nọ n'ihu ọrụ, onye mbụ si n'aka ekpe. Ọ bụ otu afọ dị obere karịa ọtụtụ ụmụ nwoke nọ n'ìgwè ahụ.
Fọdụ na-ekwu na Erling pere mpe mgbe ọ bụ nwata, mana n'ezie, ọ bụghị. Nwa nwanyị ahụ toro ogologo maka afọ ndụ ya, ọ bụ ezie na ọ dị otu afọ karịa ndị ọzọ.
N'ịga n'ihu na FC Bryne dị elu, Erling mepụtara ụfọdụ ụdị nwatakịrị mara mma. Ngwá football ya na-enweghị atụ mere ya ka ọ bụrụ onye obi ọjọọ n'ihu ihe mgbaru ọsọ. Erling dị ka nwatakịrị yiri nnọọ onye ọ bụ taa: Ọ na-amụmụ ọnụ ọchị nke ukwuu, na-azụ ọtụtụ ma na-agụ ọtụtụ. Ọ zụkwara ụdị mmadụ ọzọ ọ na-amaghị.
Learningmụta akara site n'ike nke aka ya ọ bụghị site n'aka Nna ya:
N'ịbụ onye na-awụ akpata oyi na mkparịta ụka nwata ya dị n'okpuru ebe a, Erling kwuru na ya mụtara etu esi agbata goolu, ọ bụghị site na papa ya, kama ọ bụ n'onwe ya. N'oge a (dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a), ọ malitela ịtụle ọhụụ a ma ama nke ịbụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kacha mma na mba ya.
N’oge niile ya na Bryne nọrọ, a maara Haaland maka agbapụ ya na mmecha ya. Amamihe dị otú a mere ka ọ kpọọ ndị ntorobịa mba Norway ebe o nyeere ha aka inweta Syrenka Cup.
Ikike Erling nwere mgbe niile iji nweta ọkwa ọhụrụ dị oke egwu. Hezọ o si banye n'ime igbe ahụ na nghọta ya banyere egwuregwu ahụ dịka nwatakịrị bụ ihe pụrụ iche. Inwe àgwà ndị a mepụtara ihe mgbaru ọsọ dị ịtụnanya dị ka a hụrụ na vidiyo nke afọ agụmakwụkwọ ya na FC Bryne.
N'ihi nnabata asọmpi mbụ ya, Erling dere ọganihu ngwa ngwa site na Bryne Fotballklubb wee bụrụ onye mbụ maka ndị otu klọb dịka 15 afọ na May 2016.
Akụkọ Erling Haaland - --zọ a ma ama Akụkọ:
Site na mmụba nke ihu igwe na ikike ya, enweghị njedebe nke ihe ndị Norwegian na-enweghị ike ime. Mgbe o nyesịrị ihe mgbaru ọsọ iri na asatọ na egwuregwu iri na anọ na Bryne, ndị na-eto eto malitere inweta onyinye site na nnukwu klọb - ma n'ụlọ ma na mba ọzọ.
Nzukọ Ole Gunnar Solskjær:
E nyere Haaland ikpe mbụ site na klọb ndị German 1899 Hoffenheim nke ndị mụrụ ya jụrụ. Egwuregwu nke football na-eme ka ndị na-egwu egwuregwu si Molde Footballklubb nwee ya na ndepụta kachasị mmasị ha.
Site na mkparịta ụka gara aga, kpakpando na-arị elu mechara kwaga Molde FK nke na-achịkwa ya n'oge ahụ Ole Gunnar Solskjær. Na-ebugharị ntakịrị, nke a bụ foto nke Halland na Ole nanị mgbe onye nchịkwa United nyeere ya aka dozie nsogbu uto.
Ijikwa Ulo okwu:
Erling Halland hụrụ ahụ ya ka o nwee nsogbu n'oge ọ dị afọ iri na ụma. Ka ndị otu ya toro ma to ogologo, ọ dị mkpụmkpụ ma dịkwa ogologo. N'ịchọpụta na ọ tara ahụhụ site na nwata, ụlọ ọrụ ya (Molde) kpebiri iji nyere ya aka ịnagide nsogbu ahụ. N'oge ahụ, arụmọrụ Erling dị ntakịrị ala.
Otu osi nri nyeere Erling Haaland:
Otu nwanyị, Molde's Chef aha ya bụ Torbjørg Haugen AKA Tanta, jiri aka ya nyeere ya aka imeri nsogbu uto ya. Were n'ọrụ Ole Gunnar Solskjær, ọ na-elekọta ihe oriri na-edozi ahụ nke Erling. Nwatakịrị ahụ riri nri dị ka ịnyịnya wee rịọ nri ọzọ (Norwegian Meatballs) ka ọ laa n'ụlọ mgbe ọzụzụ gasịrị. Nke a bụ vidiyo banyere otu siri nri Tanta nyeere Erling.
N'ime afọ abụọ ọ nọrọ na Molde, Erling toro oke (8cm), ọbụlagodi karịa ahụ ya chọrọ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, o toro dị ka nri si na fatịlaịza. N'ihi osi nri Tanta, ugbu a ọdị nnukwu ọdịiche dị n'etiti otu o si lee Bryne na ogo ọhụrụ ya.
Talga elu karịa atụ anya hụrụ Erling Haaland na-eche ọnọdụ siri ike karị na ahụ ya. N'oge a, ọ malitere nhụjuanya site na nhụjuanya na-eto eto. Ahụ Erling na-agbatị n'ike n'ike na ihe mgbu mere ka ụlọ ọrụ ya chịkwaa ọrụ ya.
N'ụzọ dị mma, Molde Fotballklubb nwere ndị maara ọrụ gburugburu ya ndị na-elekọta ya. O were mgbalị nke onye nkuzi ahụike Mould, Børre Steenslid iji nyere aka ijikwa uto Erling ma mee ka ọ dịrị njikere ịlụ ọgụ na ndị mmegide toro eto.
N'adịghị ka ndị otu ya, Haaland dị oke njikere ịme ihe ọ bụla achọrọ. Kwa ụbọchị, ọ na-arụ ọrụ ụbọchị niile na mgbatị - iji hụ na o mere ihe dị iche na nrọ ya.
Obi dị m ụtọ na ọganihu ahụ gara n'ihu ka ụlọ ọhụrụ ya na usoro. Erling gbanwere onwe ya ịbụ nwoke maara ihe bọọlụ. Ọ malitere ịhụ ihe ndị ọgbọ ya na-adịghị ahụ. Nke ahụ butere ngagharị ya taa na oke amamihe na igbe.
Eziokwu bụ, Erling Haaland etoghị ogologo, nnukwu na ike. Ọ mekwara ka ọ dị oke egwu ma bụrụ onye nwere ọgụgụ isi. Dinggbakwunye ọsọ ọsọ na àgwà ndị a ghọrọ ngwakọta na-egbu egbu. N'ihi ihe mgbaru ọsọ ya na-emetụ n'ahụ, onye nchịkwa ya Ole Gunnar Solskjær malitere iji ya atụnyere Romelu Lukaku.
Erling Haaland Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe o kwusịrị nsogbu uto ya, onye na-agba ọsọ ọsọ na-emepe oge Molde nke abụọ ya site na ị nweta ihe mgbaru ọsọ anọ naanị na 21 nkeji egwuregwu. Oge ahụ, Haaland natara nsọpụrụ nke akara kacha mma Molde na Eliteserien Breakthrough nke onyinye afọ.
N'oge ahụ, ezinụlọ ya malitere ịga na-enye onyinye na mba ọzọ - yana ọtụtụ klọb ndị Europe kacha elu na-arịọ maka mbinye aka ya. Ọ nwere ike ịmasị gị ịmata nke ahụ Marcelo Bielsa si Leeds United - ebe papa ya na - egwuri egwu - so na klọb ndị England mbụ nyere aka ịbanye ya.
Nnukwu Mkpebi ahụ:
Haazọ Haaland si chọọ ya, ịhapụ ezinụlọ ya na Norway maka klọb dị n'etiti ga-atụgharị na ịrị elu ọnụ ahịa ya. N'ihi ya, ọ leghaara onyinye sitere na nnukwu nnukwu klọb ma banye maka FC Red Bull Salzburg nke - na nzube na nzube niile, - nwere ebe dị mma maka ntụgharị oge ya na ama.
N'ezie, Erling meghere akaụntụ Red Bull Salzburg site na ịlele aghụghọ atọ. Nke a gosipụtara ya na U19 nke Norway na U20. Iji bido site na ndị dike mba ụwa, ọ nyeere ndị otu U20 nke Norway aka inweta nnukwu mmeri ha na akụkọ ntolite. You maara? .. Erling gbara 9 ugboro ugboro na mmeri 12-0 meriri Honduras na Mee 2019.
Erling Braut Haaland na-agbatị mkpịsị aka ya itoolu. O nyere goolu itoolu iji nye ndị otu U20 nke Norway nnukwu mmeri ha n'akụkọ ihe mere eme.
Mgbe ndị dike obodo ya mechara, ọ bụ naanị njedebe maka ihe Haaland nwere ike nweta maka klọb na obodo. Dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughi, Erling gara n'ihu na-edekọ aghụghọ okpu abụọ ọzọ na Bundesliga Austria. Ya na ya mekwara mmekorita iku ume Patson daka.
Ugboro atọ nke Haaland nwetara otuto zuru ụwa ọnụ ụbọchị atọ ka e mesịrị mgbe o meriri ugboro atọ (aghụghọ ọzọ) na asọmpi asọmpi UEFA nke mbụ maka Genk. Nke ahụ mere ka ọ bụrụ onye nke atọ kachasị nta nke nwere akara okpu n'asọmpi asọmpi UEFA.
Erling Haaland nwetara otuto zuru ụwa ọnụ mgbe agbachitere Njikọ ya na Genk.
N'agbanyeghị nke ahụ, na oge Champions League ahụ, Haaland dekọrọ ihe mgbaru ọsọ megide Liverpool. Ọzọkwa, tinye ihe mgbaru ọsọ abụọ megide Napoli. Ọ bụ n'oge a ka Football World matara na GOAT n'ọdịnihu abịala.
Akụkọ banyere Borussia Dortmund:
Halland's Red Bull Salzburg ịrị elu hụrụ mmalite nke mbufe agha n'etiti ọtụtụ ndị dike Europe. N'ime klọb niile, Borussia Dortmund gbagoro dị ka ha kwadoro mbinye aka nke Haaland.
Nna-ukwu nke aghụghọ apụtaghị na o meriri ihe mgbaru ọsọ atọ na mmalite nke Bundesliga ya. Ihe mmetụta mgbaru ọsọ Haaland gara n'ihu ka ọ na-agbaji ọtụtụ ndekọ Bundesliga. N'ihi German meteoric ịrị elu, onye na-eti Norway ihe wee bụrụ onye kachasị achọkarị n'ụwa.
N'oge a na-ede akụkọ ndụ Erling Haaland, ọ bụrụla onye nlereanya nye ọgbọ niile nke ndị egwuregwu bọọlụ chọrọ nna nna ya, Norway. Ọ bụghị naanị na Bryne ebe ezinụlọ ya si, ya mere ọtụtụ ndị ntorobịa nọ na Norway chọrọ ịgbaso nzọụkwụ ya.
O doro anya na anyị bụ ndị egwuregwu bọọlụ na-achọ ịhụ onye ọkpụkpọ ọzọ na-eto eto ka ọ weghara ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo dị ka egwuregwu na-esote. Dị nnọọ ka Kylian Mbappe, Erling Halland bụ n'ezie otu n'ime ndị kachasị mma n'usoro mmepụta na-adịghị agwụ agwụ nke na-aga n'ihu na-abịa site na Europe. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere Bio ya, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Erling Haaland Love Life - O nwere enyi nwanyi ma obu nwunye?
Site na mgbe ọ dị afọ iri na ụma, ndị Norwegian nwere ịhụnanya n'ebe mmadụ nọ. O di nwute, Erling Haaland gbawara enyi ya nwanyi n’oge nke ikpeazu nke 2018. O mere mgbe ọ gwachara ya okwu ụfọdụ na-agbawa obi.
Naanị otu nwoke maara ihe mere n'etiti nnụnnụ ịhụnanya abụọ. Aha ya bụ Stanislav Macek, onye nchịkwa ndị ntorobịa na-arụ ọrụ na Haaland na Red Bull Salzburg. Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị ihe mere n'etiti Haaland na enyi ya nwanyị mbụ.
Dabere na Stanislav Macek, Enyi nwanyị Erling Haaland bụ onye Norway. Haaland zutere ya mgbe ọ na-egwu Molde - ha wee malite ịlụ. N'ihi agụmakwụkwọ ya, ọ nweghị ike ịkwaga ya na onye Austrian n'oge ọ malitere igwu egwu na FC Red Bull Salzburg.
Mgbe ọ na-achọ ka ya na klọb ọhụrụ ya biri, enyi nwanyị Erling Haaland bịara ileta. O di nwute, o zutere onye ozo di na enyi ya nwoke. Ọ malitere mkparịta ụka na-emeghe banyere ihe ọ na-ewere dị ka ihe kachasị mkpa ya - Football. Mgbe emebiri, enyi nwanyị Erling Haaland hapụrụ Austria ụbọchị ole na ole ka e mesịrị.
Ndụ mgbe mmekọrịta mmekọrịta:
N'oge a na-ede Erling Haaland Bio, Norwegian ka ga-enye nghọta banyere ọnọdụ dị ugbu a nke mmekọrịta ya. N'oge na-adịbeghị anya, eziokwu putara banyere onye ndị egwuregwu bọọlụ na-ehi ụra.
Youmara?… Onye kacha mara anyị amara banyere enyi nwanyị Earling Haaland bụ mgbe ọ kọwara bọọlụ onyinye okpu dịka onye ọ hụrụ n'anya na onye ibe ya n'abalị ahụ.
Ruo ugbu a ọ malitere ọrụ agadi ya, ọ gwara onye nta akụkọ egwuregwu na ya enwetala ndị enyi nwanyị nzuzo ise. Ha na-anọchi anya aghụghọ okpu o meriri na Erling kwuru na ha bụ igodo nke ụdị ya. N'ezie, ọ dinara n'ihe ndina ya na bọọlụ okpu ya, na-ele ha anya kwa ụbọchị ma na-ekwupụta na ha na-eme ya obi ụtọ.
Takingghara ịlụ Nwanyị Nwanyị:
Youmara okpu okpu megide Club Brugge na 4th nke November 2020, Haaland gwara BTSports na ọ gaghị enwe enyi nwanyị ọhụụ ya na-ehi ụra n'abalị ahụ. Nke a bụ otu ihe akaebe nke vidiyo.
Maka nkọwa a dị n'elu, ọ gara n'ekwughị na Haaland - onye enweghị ezigbo enyi nwanyị, nwunye, nwa nwanyị ma ọ bụ ụmụ nwoke n'alụghị di - na-elekwasị anya n'otu ihe. Nke ahụ bụ, mezue ihe omume ya na-atọ ụtọ nke isonye goolu. Ọ bụ naanị oge tupu ya enweta ezigbo enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ ma ọ bụ mee ka ịhụnanya ya hụ ọha mmadụ.
Ndụ Ezigbo Erling Haaland:
Obi abụọ adịghị ya, ndị Norwegian na-anọchi anya otu ụzọ dị egwu n'ụwa bọọlụ. Ugbu a ị naghị ahụ goolu, ị nwere ike ịjụ ajụjụ a; Ọnye na-bụ Erling Haaland n'èzí football? N'akụkụ a, anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara onye na-eti ihe.
Nke mbu, ụdị agwa Erling Haaland na-agwakọta ebumnuche ebumnuche, nnabata na mmụọ nke Cancer zodiac. Ọ bụ ụdị pụrụ iche nke onye nọ n'ụwa, onye na-emeghe ihe n'eziokwu na-ekwu eziokwu banyere okwu - dịka ha dị.
Forhụnanya maka Chainsaw:
N'ihe banyere ọrụ ndị gafere maka ihe omume na mmasi Erling Haaland, igbutu osisi enweghị ike ịhapụ. Ekewa osisi bụ nnukwu mgbatị ahụ nke na-enyere aka wulite ogwe aka ya, azụ - yana mgbatị ahụ dị ukwuu. Ka anyị ghara ichefu, ebe ezinụlọ Erling Haaland si (Land of the Vikings) bụ ebe obibi ụfọdụ osisi kachasị elu na Europe.
Erling Haaland sere ya na igwe onodu igwe na-acho igbutu osisi. Papa ya (Alf-Inge Håland) sere n'azụ ya.
Forhụnanya maka ịkọ ugbo:
Oge Norway na-enweghị ntu oyi na-eto n'oge ezumike oge ezumike. Erling Haaland na-ewekarị ohere a iji gaa leta ezinụlọ ya na nke ka mkpa, dozie onwe ya maka ọrụ nduku. A na-ese ya n'okpuru ebe ọ na-anya traktọ, ka ọ na-akwadebe ugbo ya maka ịmị mkpụrụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Erling Haaland - tupu ọ gaa n'ugbo ya na Norway - ka meriri ihe mgbaru ọsọ 44 na asọmpi asọmpi iri anọ na oge 40/2019. Ọ na-arụ ọrụ ugbo ka ọ ghara ịhapụ ifufe 2020-mgbaru ọsọ ya.
Erling Haaland na-arụ ọrụ oge:
Na mpụga ọzụzụ ọzụzụ oge niile, Haaland na-ahụ na ọ na-arụ ọrụ oge. Vidio dị n'okpuru na-akọwa ihe nzuzo n'azụ ọganihu ya ngwa ngwa. E nwere ihe nkiri ebe ọ gbafere ugwu Norway. Ọ na-akọwa ihe kpatara ya ji enweta pasent ndị ọzọ na arụmọrụ.
Hụrụ n'anya maka ịmụmụ ọnụ ọchị:
Enwere ike iji ihe atọ iji kọwaa ihe dị n'ihu. Nke mbụ, ọ na-amụmụ ọnụ ọchị nke ukwuu, nke abụọ, ọ na-emega ahụ nke ukwuu na nke atọ, ọ na-eme ọtụtụ ihe. Na mpaghara ịmụmụ ọnụ ọchị, Erling Haaland - dị ka a hụrụ na vidiyo dị n'okpuru - nwere ike ịbụ ntakịrị ihe ijuanya. N'ihi ya, ọ na-esiri ike ịghọta n'ụzọ zuru ezu otu akụkụ nke àgwà ya.
Ndụ Erling Braut Haaland:
N’akụkụ a, anyị ga-agwa gị banyere ụzọ ndụ ya. Laa azụ na Norway, Erling Haaland kọwara onwe ya dị ka onye ama ama na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụ eze nke ya na ndị enyi ya na-emekọ oriri na ọ bothụ bothụ na ụlọ ịgba egwu na ụlọ ịgba egwu abalị.
Ọ dị nwute na afọ 2020, otu ọpụpụ ụlọ ịgba egwu abalị Erling Haaland emeghị nke ọma ka eburu ya dịka ndị nche na-achụpụ ya n'ụzọ mmechuihu. Nke a bụ vidiyo - nke gosipụtara ihe na-amalite nke ọma na ndị enyi ya ma na-ejedebe ihere.
Erling Haaland Uwe:
Ndị ji ụkwụ aga bọọlụ classy ga - abụrụ anyị nnukwu mmụọ mgbe anyị bịara n’ihe ejiji. Erling Haaland bụ nwoke na-etinye ego ya na uwe ndị pụrụ iche. Anyi nwere otutu ihe osise nke uwe ejiji ya nke gosiputara ejiji na ngwa nke 2016. Uwe ejiji Haaland na-egosiputa àgwà ya na ọ bụ onye hụrụ Nike slippers na iPhones n'anya.
Linggbọ ala Erling Haaland:
Ndị Norwegian anaghị ebi ndụ okomoko nke ndị na-agba ọsọ ụkwụ na-ejikarị ụgbọ ala na ụlọ dị oke ọnụ etu isi. Site na ihe anyị gbakọtara, Erling Haaland abụghị onye ama ama na-enwe mmasị ibi ndụ oke. Na mgbakwunye na iji ejiji n'echeghị echiche, ọ na-anyazi obere ụgbọ ala n'agbanyeghị nde ndị na-abanye n'akpa uwe ya.
Gbọ ala Erling Haaland na-agwa ọtụtụ ihe gbasara onye ya.
Ndụ Ezinụlọ Erling Haaland:
Ndị ezinụlọ ya mara mma - Gry Marita (mum), Alf-Inge (Papa), Gabrielle (nwanne nwanyị) na Astor (nwanne) bụ ndị kachasị mkpa na ndụ ya. Tupu Erling ama ama, o nweela ndị a hụrụ ya n'anya na-enweghị atụ.
N'akụkụ a nke Bio anyị, anyị ga-agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara ndị ezinụlọ ya. Anyị na-amalite n’isi ezinụlọ ya.
Banyere Erling Haaland Nna
Alf-Inge Rasdal mụrụ na 23 nke ụbọchị nke ọnwa 1972 na Stavanger, obodo na obodo na Norway. Ọ tolitere na Bryne, obodo ebe ya na nwa ya nwoke malitere akwụkwọ akụkọ bọọlụ.
Enweghi ike ịkọwapụta onyinye Alf-Inge na mmepe Haaland na football. Na nzuzo, ọ nyeere aka zụọ onye na-eti ihe site na afọ 6 ruo mgbe ọ na-emechi 15 ma na-aga n'ihu na-eduzi ya na ịme mkpebi ndị dị mkpa maka ọdịnihu ya na Sport. Ezigbo mmekọrịta dị n’etiti nna na nwa nwoke. Erling na-ezo aka na papa ya dị ka enyi ya na onye ndụmọdụ.
You knowmara?… Alf-Inge jisiri ike na-ala ezumike nká mgbe afọ asatọ na-eche maka unan ya gwọọ kpamkpam. Otu ụlọ ọrụ Bryne bụ Rosseland BK, na Norwegian Nke atọ, nakweere ya na 2011.
N'ụzọ dị mwute, ụkwụ Alf-Inge (nke Roy Keane merụrụ ahụ) enweghị ike ikwe ka ọ gaa n'ihu na football. Mgbe o jisiri ike igwu egwuregwu itoolu, tụlee otu ihe mgbaru ọsọ, papa m dara ogbenye enweghị ike ịnwe ya ọzọ. Alf-Inge Rasdal lara ezumike nká nke ọma n'afọ 2012.
Tupu ezumike nká, bọọlụ nna Erling Haaland gbara maka ndị otu egwuregwu bọọlụ nke mba Norway. O gosipụtara na 1994 World Cup egwuregwu megide Mexico na Italytali. Alf-Inge nwere oghere iri atọ na anọ nke Norwegian na asọmpi mba ya ikpeazụ megide Bulgaria na Eprel 34.
Banyere Erling Haaland nne:
Ruo ugbu a, Gry Marita ka bụ onye otu ezinụlọ nke kachasị aha ya nke aha ya adịghị apụta na ihe ndị ama ama nke mbido nwata rue ụbọchị. Na agbanyeghị, o nyeere aka zụlite Haaland na ụmụnne ya n'ụzọ dị mma wee kpee ekpere na nzuzo maka ọganiihu ha ụbọchị.
Lingmụnne Erling Haaland:
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-eju anya na etu oge si efe ọsọ. Karịa ka otu ezigbo ndị enyi atọ a siri nwee ọganihu kemgbe ọtụtụ afọ. Astor, Gabrielle na Erling niile abịawo ogologo oge kemgbe ụbọchị nna ha merụrụ Roy Keane.
Hụ otu Erling Haaland na ụmụnne ya siri gbanwee kemgbe ọtụtụ afọ.
Akụkụ nke akụkọ ndụ anyị na-ekpughere eziokwu ndị na-adọrọ mmasị banyere ụmụnne Erling Haaland. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Banyere Astor, Erling Haaland Nwanna:
Oge izizi iji mara banyere ya bụ ụlọ elu ya. Astor Haaland dị elu bụ 195cm na 6 ụkwụ 4 sentimita asatọ. Ọ dị naanị centimita karịa Erling nwanne ya nwoke. Astor bu nnukwu mmiri na azu.
Nwanna Erling Haaland Astor bụ nnukwu mmadụ hụrụ mmiri na azụ n’anya.
You maara? Dream Nrọ nna Erling Haaland chọrọ ka ọ hụ ụmụ ya ka ebumnuche ezinụlọ ahụ malitere site na ọkpara ya, Astor. Na mbido, Alf-Inge kwadoro ya ka ọ bụrụ nwoke mascot nwa nwoke nke obodo. Little Erling dị obere n'oge ahụ. Maka ebumnuche a na-amaghị ama, mmasi bọọlụ Astor nwụrụ na Erling ghọrọ onye ahọrọ.
Erling Haaland Nwanna, Astor bụburu mascot maka Manchester City.
Banyere ihe omume ntụrụndụ nke ụmụnna, Erling na Astor Haaland ọtụtụ mgbe, na-ahọrọ ịnọ jụụ n'ebe kachasị amasị ha - ọdọ mmiri snow. Dịka e kwuru n'okpuru, a na-eji ụmụnne abụọ ahụ mee ezigbo okpomọkụ. Maka Erling, omume ahụ na-enyere aka ụbụrụ ya aka, na-enyere ahụ ya aka ịmekwu calorie ma hie ụra nke ọma.
Erling na Astor hụrụ ọdọ mmiri snow n'anya. Ọ dị mfe na anya - mana n'ezie, ihe siri ike ịnwale.
Banyere Gabrielle - Nwanna Erling Haaland:
Nke mbu, o na-aza aha otutu, Gabi. A mụrụ Gabrielle Braut Haaland na 9th nke Jenụwarị 1998. Ọ bụ naanị nwanne nwanyị Erling na naanị nwa nwanyị Gry Marita Braut na Alf-Inge Håland.
Zute Gabrielle. Ọ mara mma ma tolite.
Na-etolite, ụmụnne nwoke na nwanne nwere mmekọrịta chiri anya - ya na Erling na-eme ka ncheta ndị a bụrụ ọmarịcha ihu ọchị ya. Ọbụna ruo ụbọchị na n'ime usoro ihe omume ya na-arụsi ọrụ ike, Gabrielle na-achọta oge iji nọrọ ebe ahụ maka nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ.
Gabrielle na Erling - mgbe ahụ na ọtụtụ afọ gachara. Ha abụọ yiri ka ha dị ezigbo nso.
Maka ndị na-amaghị, a kwenyere Gabrielle Haaland na ndị agha Norway. Anyị nwere ike ịhụ ya ka ọ nwee NJ na akara aha ya na uwe ndị agha ya. Nakwa n'oge a na-ede Bio a, ọ lụrụ Jan Gunnar Eide na obi ụtọ ma gọzie ụmụ nwanyị abụọ.
Banyere nwanne nwanne Erling Haaland - Albert Braut Tjaaland:
Maka ndị na-ebido ebido, ọ bụ ndị ọgba bọọlụ (onye na-egbu egwuregwu) na-aza aha otutu - The Goal Scoring Machine na Next Haaland. Albert Tjaaland bụ nwa nwanne nne Erling Haaland. N'ịbụ onye a mụrụ na 11th nke February 2004 na-egosi na ọ bụ ugbu a 17 afọ na ọnwa 11.
Zute nwanne nwanne Erling Haaland - Albert Braut Tjaaland. Ọ bụ akara nyocha nke serial.
A na-ahụta Albert Tjaaland dị ka nnukwu onyinye na-abịa abịa na bọọlụ Norwegian. Gbaso nzọụkwụ nke Erling na papa ya (Alf-Inge), ọ malitere na Bryne ntorobịa. Know maara?… Albert Tjaaland nwetara ihe kwesịrị ekwesị nye ndị na-eto eto Molde mgbe o meriri ihe mgbaru ọsọ 69 na egwuregwu 48 na ndị ntorobịa Bryne.
Vidio nke ihe mgbaru ọsọ Albert Tjaaland abụghị naanị igosi ikike ya kama ọ na-eme ka nnukwu mkpuchi gbara ya gburugburu. Lelee 1.85 m (6 ft 1 na) n'ihu na omume, gụnyere ya ihe mgbaru ọsọ nzuzu.
Banyere nne na nna ochie Erling Haaland:
Foto dị n'okpuru ebe a na Gabrielle, ha abụọ alụọla di ma ọ bụ nwunye ruo ọtụtụ iri afọ ma na-eme ncheta agbamakwụkwọ ha kwa ụbọchị nke 25 nke July. A na-eme nnyocha iji chọpụta ebe nnụnụ ịhụnanya abụọ a dabara - ma ọ bụrụ na nne na nna ya ma ọ bụ nne na nna ya.
Zute Erling Haaland na nne na nna ochie ya na nwanne ya nwanyị, Gabrielle na-ekpori ndụ.
Banyere ndị ikwu Erling Haaland:
N'ịga n'ihu ezinụlọ ya, anyị maara Jan Gunnar Eide bụ onye na-akwado nwanne nwanne Haaland (lụrụ Gabrielle).
Otu n’ime ndị ikwu ya (nwanne di ya) bụ Thea Vigre. Ọ lụrụ Astor Haaland. A mụrụ na 24th nke November 1996, ọ bụ nwanyị ọchụnta ego Norwegian nwere ụlọ ahịa akwa, GANNI na Stavanger, Norway. Nke a bụ Thea Vigre, nwunye Astor Haaland.
Enweghi ndekọ banyere nwanne nna nna ya, ụmụ nwanne nna ya na ụmụ nwanne ya na nwanne nne ya n'oge emelitere akụkọ ndụ ya.
Eziokwu Erling Haaland:
N'ịchịkọta akụkọ ndụ anyị, anyị ga-eji ngalaba mmechi a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara ndị na-agba ọsọ na Norwegian. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Eziokwu # 1 - Erling Haaland Hates Interview:
Kemgbe ọ bụ nwata, ọ nweghị mmasị na ya. Maka Haaland, ihe atụ nke ajụjụ ọnụ nwere ike ịbụ obere ihe dị ka nne ya na-ajụ ya ihe ọ chọrọ iri nri abalị. Eziokwu bụ, ọ bụ n'ezie ihe ịma aka nye Gry Marita Braut ịjụ nwa ya nwoke ajụjụ dị mfe nke ihe ọ chọrọ maka nri abalị.
Eziokwu bụ, Erling dị otu a kemgbe ọ bụ nwata ọ ga-abụ na ọ gaghị agbanwe. Ọ bụ nchịkọta vidiyo na-akọwa asị Erling Haaland maka ajụjụ ọnụ. Ọ bụ naanị otu okwu gbasara mgbe etinyere isi na-ewu ewu.
Eziokwu # 2 - Ahụkarị Haaland Ajụjụ Ndị Na-aza:
(1) Girlmụ agbọghọ nọ na bikini na-ajụ ya; 'Olee otú m si ele anya? Nzaghachi Haaland: Na anya gị.
(2) Ajuju ajuju ajuju; Gwa m ihe nkwalite mkpali abụọ. Nzaghachi Haaland; (i) workrụsi ọrụ ike (ii) hardrụsi ọrụ ike. Haaland na nyocha ọrụ.
(3) Ajuju ajuju ajuju; gini mere m ga eji iku gi? Nzaghachi Haaland; Gịnị mere?
(4) Onye nta akụkọ jụrụ: Haaland, olee mgbe amụrụ gị? Nzaghachi Haaland: N’ụbọchị ncheta ọmụmụ m. Onye nta akụkọ ahụ jụrụ, sị: So saa na wote nka? Nzaghachi Haaland - 21st July. The ajụjụ ọnụ na-ajụ ọzọ: olee afọ? Nzaghachi Haaland: Kwa Afọ. Jiri obi oma soro anyi kenye ndi ozo na mpaghara nkọwa.
Eziokwu # 3 - N'iji ụgwọ ọnwa Dortmund ya na Citizen Nkezi:
Nweta ego na Norwegian krone (NOK)
Nweta ego na Pound sterling (£)
Kwa Afọ: € 7,343,280 73,552,929 NOK £ 6,358,178
Ọnwa kwa: € 611,940 6,129,410 NOK £ 529,848
Kwa Izu: € 141,000 1,412,306 NOK £ 122,084
Kwa :bọchị: € 20,142 201,758 NOK £ 17,440
Oge Awa ọ bụla: € 839 8,406 NOK £ 726
Nkeji ọ bụla € 14 140 NOK £ 12
Sekọnd ọ bụla: € 0.23 2.3 NOK £ 0.20
Kemgbe ị malitere Erling Haaland'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Dortmund.
Know Ebe ọ si bịa, nkezi ndị Norway na-enweta 612,000 NOK kwesịrị ịrụ ọrụ maka afọ 10 iji rite ụgwọ ọnwa Earling Haaland na BVB.
Eziokwu # 4 - Erling Haaland Tattoos:
Inwe ahụ mmadụ bụ ntakịrị ihe na-echegbu Haaland n'oge edere. Ọ na-elekwasị anya na imeziwanye ahụ ya site na mmega ahụ. N'ezie ọ na-eme ka ahụ ike na-atọ ụtọ ma ọ ga-amasị ile anya macho.
Erling Braut Haaland enweghị akara ọ bụla n'oge ederede.
Eziokwu # 4 - Ihe kpatara aha otutu:
Enyere ya aha na-atọ ọchị "The Man nwa" nyere ya ugwu ugwu ya na ntụkwasị obi ya nke na-agba bọọlụ egwu n'agbanyeghị na ọ ka bụ nwata.
Amabeghị okpukpe nke Haaland n'oge edere ka ọ na-enyeghị ndị na-egosi ihe okwukwe ya site na ajụjụ ọnụ ma ọ bụ na ntanetị mgbasa ozi. Agbanyeghị, a hụrụ nwanne ya nwoke nke okenye Astor ka ọ na-ese foto n'ụlọ alakụba, mmepe nke na-egosi Haaland nwere ike ịbụ Muslim.
Nwanne nwoke nke okenye Eling Braut Haaland na ụlọ alakụba dị na Dubai.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụta akụkọ nwata anyị nke Erling Braut Haaland gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Thomas Delaney Akụkọ nwata gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ